Tag: ganacsiga codka | Martech Zone
Tag: ganacsiga codka
Cod miyay ku jirtaa Cusp-ka Ganacsi Beddelidda?
Arbacada, Janaayo 24, 2018 Sabti, Febraayo 13, 2021 Douglas Karr
Bandhigga 'Amazon Show' ayaa laga yaabaa inuu noqdo iibsiga ugu wanaagsan ee aan sameeyay 12-kii bilood ee la soo dhaafay. Mid baan u iibsaday Hooyaday, oo ku nool meel fog oo inta badan leh arrimo la xiriira isku xirnaanta mobilada. Hadda, waxay u sheegi kartaa Show-ga inay i soo wacdo oo waxaan ku samaynaynaa wicitaan fiidiyow ah ilbidhiqsiyo gudahood. Hooyaday aad ayey u jeclayd sidaas darteed waxay u iibsatay mid ay ayeeyo u tahay si ay iyadu ula sii xiriirto. Aniguba waan awoodaa